Amamememoni amaninzi anamhlanje anqabana nezihlalo zamasondo eziqhelekileyo ngokuthanda izithako ezahlukeneyo. Yaye yonke into eyenza imfashini - ibangela ukuphikisana nokuxubusha. Kukho imfuno - kukho ukunikezelwa. Kodwa ngaba konke kungabi nafu kwaye kuyabonakala? Yaye ngubani, emva kwayo yonke into, elungileyo-abalandeli be-sling okanye abachasene nabo, isilumkiso semiphumo engozi kubantwana kunye noomama? Ngezantsi, kuphela iinjongo ezijoliswe kuyo, kwaye kukhethwa kukuba unxibe iimvumba ekubetheni okanye ungagqoki - makube kuwe.
Enyanisweni, unjalo kunye kunye, kodwa lukhulu-luhamba kakuhle. Ziziphi iintlobo, ziphuma nje ezininzi kumama emhlabeni jikelele? Inyaniso efunekayo ukuba ube kunye nomntwana, ungahambi naphi na, ungenzi nto, ungahlangabezane nabani na. Abantu abancinci banamathele kwisihlobo sendulungu: indlu - indawo yokudlala yabantwana - indlu. Oku kunokubangela ukuxinezeleka okukhulu, kwintando eninzi kunye nokuzinikela komsebenzi kamama wowesifazane. Ukubethela kunika into ephambili - inkululeko yesenzo. Umntwana uhlala nawe - ngelo xesha unako ukwenza nantoni na oyifunayo. Unokuhlamba izitya, upheke, uhambe uthenge okanye udibane nabahlobo. Kwaye umntwana uya kuhlala ekhululekile, ekhululekile kwaye evuya, evakalelwa kukuba umama wamfudumele kwaye uyamkhathalela.
Omnye kunye nalabo abancancisayo. Usana lunokudliwa naliphi na ixesha, ngokukhawuleza xa ecela. Uya kulisa ubisi lwakhe, kwaye umama uya kuba lula ukusebenza kwimicimbi yabo. Akukho zibalo, iirimim, ukukhethwa kweendlela zokutya kunye nokwesaba ukuba ubisi luncinci kwaye alanele umntwana. Oomama abaninzi abakhethileyo ukuba bahlale bembethe abantwana bafanelekile ukutya nakwisitalato, ngokufanelekileyo ngexesha lokuhamba.
Ewe, kuphela ehlobo. Kodwa ke kulula ukuhlala kufuphi nesifuba sele kumdambise, kunye nokukhwabanisa oku kuphuculwe kuphela. Ngaloo nto, noogqirha abavumelani.
Ayikho into ecacileyo
Inyaniso yokuba umntwana uhlala esondele kuwe, ngakwesinye icala, uyamangalisa. Ngakolunye uhlangothi, ngelixa umntwana esincinane kakhulu, oomama bayavuma ukuba bahlaziye, abaxhamli, bangakwazi ukunyamezela i-colic, amazinyo nezinye iingxaki. Emva koko, umama uya kuhlala ethuthuzela, ehamba, ezolile. Kodwa xa umntwana ekhula, umama uyaqaphela ukuba ngaphandle kwe-slip akushiye etaweni nje ngomzuzu - le sele sele ingxaki. Umntwana akafuni ukwahlukana nonina kwiminyaka emithathu okanye emine, uye kumyezo - uvavanyo olupheleleyo, kwaye emva koko uxhomekeke Oku kuqinisekisiwe: abantwana abachitha ixesha kwi-sling baxhomekeka kakhulu, bancike kakhulu kumama, kodwa kulungile okanye kubi - wonke umntu uyazigqiba.
Ngoku siza kushiya i-psychology siye kwiyeza. Ukunyamezela umntwana rhoqo ngumthwalo. Ngokukhula komntwana, lo mthwalo ukwandisa. Kwaye umgudu uqina, kungakhathaliseki ukuba uqeqesho olunzima kangakanani. Unomlinganiselo wakhe wendalo wamandla, kwaye "kwizicwangciso" zakhe zoxinzelelo iiyure ezingama-24 ngosuku phantsi kobunzima be-chadaug ekhulayo, ngokuqinisekileyo akubandakanyi. Kuthetha ukuthini umama osithembekileyo? Abaphiki ukuba i-"aches" emva ukuba kunokuba nzima kakhulu ukugqoka, ngakumbi xa abantwana beqala ukuhlawulela kwaye batyelele kwisalathisi, kodwa bonke bathabatha ezi ziphazamiso, njengesipho. Njengoko, ndingumama-kufuneka ndibekezele. Ngaba kukho intlungu? Kukho. Kwaye iingxaki ze-sopina, amaqabane angamaqabane kunye neenyawo kwi-mummies nazo-akunakuphikiswa. Kukho iinkcukacha ezisemthethweni zoogqirha kule nqanaba, nantoni na ongayithethayo.
Ngoku kungqingwa komncinci. Ngaba ikulungele kwaye ikhuselekile kuye? Yiloo nto iingcali ezizithethayo: ukugqoka umntwana kwinoma yimuphi umtsalane kude kube yinyanga e-3-4 yingozi ebomini bakhe! Kuya kuwe ukuba wenze isigqibo sokuba okanye ungenzi nto kwakhona. Kodwa akunjalo nje ukuba oogqirha benina baqaphele kangaka? Yintoni, ekugqibeleni, ngaba kunengqondo ukuxoka nokuxoxela? Umntwana wakho - ewe uyenzayo, bathi, into oyifunayo! Kwaye bathi kuyingozi. Yingakho. Ukuhlala ixesha elide lomntu omncinci kwindawo yokunyanzeliswa kukuphazamisa ukujikeleza kwegazi le-cerebral. Ukuphatha umntwana osakwaziyo ukubamba intloko, ngokuqinisekileyo-akuvumelekanga. Intloko iya kuphinda ibuyele, eya kuvimba ukujikeleza kwegazi ngaphakathi komzobo we-vertebral, kwaye oku kukufa okuqinisekileyo. Kodwa simele sivume - ukuba uyayenza ngokufanelekileyo, thabatha i-sling ngokudala kunye nobukhulu bentsana, uyibeke ngokufanelekileyo kwaye uyibeke umntwana apho, ngoko ayiyi kuba neengxaki. Okokuthi, ingozi ayikho kwisibetho ngokwawo, kodwa kuphela ekusebenziseni kwayo okungalunganga. Umntwana onokufana okufanayo unokugxina kwisihlalo sabakhubazekile, kwisibhedlele, nangona ngumlenze wokubeletha (okwenzeka rhoqo), ukuba umntu akanandaba nomba wokhuseleko.
Ngoluvo olufanayo lweengcali
Izinto ezintathu azikhumbukiyo: ukubetha kunciphisa oomama bexinzelelo ngenxa yokungakwazi ukuhlala ubomi obuzeleyo, kunika umntwana ithuba lokuzinza nokunyamekela, uququzelela ukusekwa kokuthintana kwengqondo phakathi komama nosana. Kwaye nantoni na abachasene nale festile yinto ekhoyo namhlanje, abaxhasayo bayanda ngakumbi. Ukubethelwa, xa kusetyenziswe kakuhle, kunokusombulula ezininzi iingxaki zabamama abangafuni "ukuwa" ebomini ngexesha lokuhamba. Emva kwakho konke, oku kuveliswa ngonaphakade, ukwenzela ukuba, kungathi kungabikho nenye impawu yokunakekelwa kwabantwana, ihlolwe lixesha. Yaye ivunyiwe ngabamama banamhlanje kunye nezingane zabo.
Udlala njani neenyanga ezi-6?
Isaladi evela kwi-horse-mackerel
I-sauce ye-Cheese kunye ne-artichokes kunye nesipinashi